ABE Level -6 Diploma in Business Management
Start Date : 12-January-2020
End Date : 30-December-2020
Schedule : Saturday – (6:00pm to 8:30 pm) (3:00pm to 5:30am), Sunday – 9:00Am to 11:30 Am, Monday – 6:00pm to 8:30 pm, Tuesday – 6:00pm to 8:30 pm, Thursday– 6:00pm to 8:30 pm,
Class Code : ABE-08-01
Place : Myaynigone Teaching Center(1) Yangon,
Lecturer : Dr. U Sein Min - Academic Director, Strategy First Institute, PhD (Passau, Germany), M. Com, B. Com (YIE),
Lecturer : Daw Cho Thiri Maung - MBA (YIE), MBA (Hitotsubashi University, Tokyo),
Lecturer : Dr. Daw Hla Hla Mon - Ph.D (Commerce), MBA (AIT (Bangkok), Thailand), M.Com, B.Com (Hons, YIE),
တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး(သို့) လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိပြီး Senior Management Level သို့ တက်လှမ်းလိုသူများ၊ MBA တက်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေသောသူများအတွက် Association of Business Executives (abe, UK) မှ Diploma in Business Management (RQF Level6) Batch-8 ကို ဇန်နဝါရီလ(၁၂) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်။
ယနေ့ခေတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်ချက် တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပုံတွေ၊ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ဆိုင်ရာ သဘောတရားတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းသိရှိနားလည်ပြီး အနာဂတ်စီးပွားရေးခေါင်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ABE Level6Diploma က ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
Association of Business Executives (ABE, UK) မှ ချီးမြှင့်မယ့် Level6စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာ ရရှိဖို့အတွက် ဘာသာရပ် (၆)ခုကို သင်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။
ABE Level6Diploma ပြီးမြောက်ရန်အတွက် (၆)လ(သို့) (၁)နှစ် အချိန်ယူတက်ရောက်ရပါမည်။
Strategy First တွင် ABE L6 (၆) ဘာသာအတွက် သင်တန်းကြေးသွင်းပြီးပါက ABE L6 Diploma ရရှိသည်အထိ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
📌ABE ဘာသာရပ်များကို ရုံးချိန်လွတ်တန်းခွဲသစ်များ စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
🎓 ABE Level6Diploma in Business Management သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များ
1. Developing International Markets (Exam)
2. Business Strategy & Decision-Making (Exam)
3. Business Ethics & Sustainability (Exam)
4. Leading Strategic Change (Assignment)
1. Corporate Finance (Assignment)
2. Strategic Stakeholder Relationships (Assignment)
📅 ဘာသာရပ် တစ်ခုချင်းတက်ရောက်လိုသူများလည်းတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဘာသာချင်းစီအတွက် abe မှ အောင်လက်မှတ်များ (Certificate of Unit Achievements) ကိုတစ်စောင်လျှင် ပေါင် ၄ဝ ပေးသွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက် - အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို ပြည့်မှီရမည်ဖြစ်သည်။
- တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရထားသူများ (သို့)
- ABE Level5Diploma အောင်မြင်ပြီးသူများ (သို့)
- BTEC HND အောင်မြင်ပြီးသူများဖြစ်ရမည်။
- ဘွဲ့မရရှိထားသူများအတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၃) နှစ်အထက်ရှိပါကလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
* ABE L6 တက်ရောက်ရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရထားပြီးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများမတက်ရောက်ဖူးပါက Strategy First တွင် Business Management and Administration (BMA) သင်တန်းကိုအခမဲ့ပူးတွဲတက်ရောက်ရပါမည်။
Core Modules (Business Management) သင်ကြားမည့်အချိန်များ
1. Developing International Markets
Lecturer – ဒေါက်တာဦးစိန်မင်း , B. Com, M. Com (YIE), Ph.D (Passau University, Germany)
Starting Date – 14th Jan 2020
Location –Myaynigone Teaching Centre – 1 (Panchan Tower)
2. Business Strategy & Decision-Making
Lecturer – ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဒေါ်လှမြင့် , B.Com (Hons, YIE), M.Com, D.Litt (YIE),
Every Thursday – 6:00 PM to 8:30 PM
Starting Date – 16th Jan 2020
Location – Myaynigone Teaching Centre –4(Myaynigone)
3. Business Ethics & Sustainability
Lecturer – ဒေါက်တာဒေါ်ဥမ္မာမြင့် , B. Com (Hons), M. Com(YIE), Ph.D (HRM, Delhi)
Starting Date – 18th Jan 2020
Location – Myaynigone Teaching Centre –2(Myaynigone Pyay Road)
4. Leading Strategic Change
Lecturer – ဒေါ်ချိုသီရိမောင် , MBA (YIE), MBA (Hitotsubashi University, Tokyo)
Every Saturday – 3:00 PM to 5:30 PM
Location – Myaynigone Teaching Centre –2(Myaynigone U Wisara Campus )
Elective Modules (Business Management) သင်ကြားမည့်အချိန်များ
Lecturer – ဒေါက်တာဒေါ်လှလှမွန်, B. Com (Hons), M. Com (YIE), MBA (AIT (Bangkok), Thailand), Ph.D (Commerce)
Starting Date – 12nd Jan 2020
Location – Myaynigone Teaching Centre – 1 (Panchan Tower)
မှတ်ချက်။ ။ Corporate Fianance အတန်းချိန်သည် Sunday အတန်းချိန်ပိတ်ခဲ့ပါက ကြားရက် ည (၆)နာရီ အတန်းချိန်တစ်ခုနဲ့တွဲတက်ရပါမည်။
2. Strategic Stakeholder Relationships
Lecturer – ဒေါ်အေးအေးဝင်း, B. Com (Hons), M. Com(YIE), Dip in English, M.A (International Business Studies) (Sophia University, Japan)
Every Friday – 6:00 PM to 8:30 PM
Starting Date – 24th Jan 2020
abe Diploma in Business Management (RQF Level6- Graduate Diploma)
သင်တန်းကြေး တစ်ဘာသာချင်း တက်ရောက်ပါက --- 465,000 Kyats
- (၆)ဘာသာလျှင် သင်တန်းကြေး-------2,790,000 Kyats
- Strategy First တွင် ABE Level6(၆) ဘာသာလုံးတက်ရောက်ရန်အပ်နှံပါက သင်တန်းမှ ဘာသာရပ်အားလုုံး (၆)ဘာသာအတွက် သင်တန်းကြေး - 2,500,000 Kyats
- Strategy First တွင် တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူဟောင်းများအတွက်- (20%) Discount ။
- ကျောင်းသား/သူများ၏ သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေများအတွက် - 10% Discount။
- Strategy First တွင် BMA တက်ရောက်ထားသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် - 300,000 Kyats Discount
abe Exam and Member Registration Fees
Member Registration Fees – GBP 75 per year
စာမေးပွဲကြေး (တစ်ဘာသာ) – GBP 60 per subject
*Member and Exam Fees များသည် ငွေလဲနှုန်းအလိုက် အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲရှိနိုုင်ပါသည်။
*AYA Education Loan ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်သလို AEON Education Loan ဖြင့်လည်း သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင်သည်။
(သင်တန်းကြေးမျာကို AEON လစဉ်အရစ်ကျငွေပေးချေမှု စနစ်ဖြင့်လည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။)
အိမ်ပြန်နောက်ကျသော သင်တန်းသားများအတွက် အိမ်ပြန် Ferry များလည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Telenor Star ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Strategy First မှာသင်တန်းအပ်ပြီး Discount ရယူနိုင်ပါသည်။
Telenor Star for Online Register =50000ks Discountရယူနိုင်ပါပြီ။
Campus 1 :No.8, Ground Floor,Panchan Tower, Bargayer Road, Myay Ni Gone, San Chaung Township, Yangon.
Campus2:No.239, Pyay Road (near Myay Ni Gone City Mart), San Chaung Township, Yangon.
Campus3:No.237, Corner of U Wizara Raod and Dhamazedi Road, San Chaung Township, Yangon.
Campus4:No.575, Pyay Road, Helden, Kamayut Township, Yangon.
Campus5:No.142, 146, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon.